'မနေ့ကဖြစ်သည် ၂' ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို မတူညီသောရသကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဒါရိုက်တာနှင့် သရုပ်?? - Yangon Media Group
‘မနေ့ကဖြစ်သည် ၂’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို မတူညီသောရသကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဒါရိုက်တာနှင့် သရုပ်??
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၄-ွှဗျွ့ှ့- ဠ ဏမသိကခအငသည မှစီစဉ်သည့် ”မနေ့ကဖြစ်သည် ၂” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ယခင်ရိုက်ကူးပြသခဲ့ သည့် ”မနေ့ကဖြစ်သည်” ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် မတူညီသော ရသများကို ပရိသတ်များခံစား ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဒါရိုက် တာနှင့် သရုပ်ဆောင်များကိုပါ ပြောင်းလဲသရုပ်ဆောင်စေပြီး နို ဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် စတင်ရိုက် ကူးပုံဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒါရိုက်တာသည်ခေတ်နေက ပြော သည်။
”ကျွန်တော်ဒီရုပ်သံဇာတ် လမ်းတွဲကြီးကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် အချိန်လေးလလောက်ကြိုတင်ပြင် ဆင်ပါတယ်။ ရှေ့ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အပိုင်းတစ်နဲ့ အခုရိုက်ကူးတော့မယ့် အပိုင်းနှစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ တစ်ပိုင်းနဲ့ တစ်ပိုင်းကိုမတူညီတဲ့ ရသတွေကို ပေးနိုင်မှာပါ။ အရှေ့ကအပိုင်းတစ် နဲ့တူတာဆိုလို့ ဇာတ်ကောင်တစ် ကောင်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရဲအုပ်တစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ကောင် ပါပဲ။ ကျန်တဲ့ကာရိုက်တာတွေ ကျန်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ မတူုညီတဲ့ကာရိုက်တာတွေဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ကျော်ကျော်ဗို၊ အောင်မင်းခန့်၊ ခါရာ၊ တိုင်ရွှန်၊ ဆုပန်ထွာ၊ အေးမြတ် သူ၊ သံသာမိုးသိမ့်၊ ကောင်းဆက် နိုင်၊ မင်းဘုန်းမြတ်၊ ကျော်သက်ဝေ နှင့် အခြားသောအနုပညာရှင်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ယခင်ရိုက်ကူးပြသထားသော အပိုင်းတစ်တွင် သရုပ်ဆောင် သူရိယ၊ အေးမြတ်သူ၊ ယွန်းယွန်း၊ အလင်းရောင်တို့နှင့် အခြားသော အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာတို့က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားကြခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့် သရုပ် ဆောင်ဆုပန်ထွာက ”ကာရိုက်တာ ကတော့နည်းနည်းတော့ဗီလိန် ဆန်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်ဗိုကို နည်းနည်းလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးရမယ့် နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဇာတ်ကားမှာကိုယ်က လုပ်ကွက်တွေတော့ရှိပါတယ်။ ဗီ လိန်မှဘာမှဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ကိုယ်လည်းလုပ်နိုင်တဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါ တယ်။ အိုက်တင်လုပ်ရမယ် သရုပ် ဆောင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကာရိုက် တာမဆိုရိုက်ကူးဖြစ်မှာပါ”ဟု ပြောသည်။
ယင်းဇာတ်ကားကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်စတင်ရိုက်ကူးသွား မည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လ လောက်အကုန်အပြီးသတ်ရိုက် ကူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
''Back to Millenium လိုပွဲမျိုး နောက်ထပ်ပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် တောင်မှ ၁ဝ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်လောက် နေမှပဲ ထပ်လ??
ဝမ်းတွင်းမြို့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ကားလမ်းဘေး၌ ကျည်ဆန်များ တွေ့ရှိ
မယ်မြေကမ္ဘာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး မန္တလေးမြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်များ မန္တလေးမြို့၌ အ??
အိန္ဒိယ ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစ်စီး ချောက်ထဲထိုးကျ၊ ၁၁ ဦးသေ
တံတားပြီးပါက ဒလဘက်ခြမ်းတွင် ရန်ကုန်အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ထူထောင်မည်
ကလေးဝမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းသာယာလှပရေး ငွေကျပ် သန်း ၁ဝဝ အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေ
ပြည်သူတွေ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရတဲ့ လူဆိုးလူမိုက် ခေတ်သစ်ဇိုးတွေရဲ့ ပြဿနာ
ကမ္ဘာဖျက် စစ်ပွဲထဲမှ ကားစက်ရုပ်လေး Bumblebee
ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသမား ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာ နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့် ဂါရဝပြုပွဲ ရန်ကုန်မြ?